Inay saxiixeen hesiiska furiinka, farriintii dareenka lahayd ee Icardi ku badbaadiyay wada-jirka qoyskan & xiriirka Wanda-Icardi oo si wanaagsan kusoo laabtay – Gool FM
(Paris) 26 Okt 2021. Kaddib 10 maalmood oo maskaxda iyo qalbiyada Wanda Nara iyo Mauro Icardi dhex dabaallanayeen webiyaal murugo iyo niyad-jab ah, waxaa haatan caadi kusoo laabtay noloshoodii iyadoo Wanda ay qiratay inay xitaa isku raaceen inay kala tagaan lammaanaheeda si ay nabad ugu soo gabagabeeyaan xiriirka siddeed-sano jirka ah.
Xaaska laacibka Paris Saint-Germain ayaa sheegtay inay isla garteen inay is furaan seygeeda si ay uga bad-baadaan dagaal sii socda, hase ahaatee, ugu dambeyn farriin uu usoo diray Icardi ay ku xasishay iyadoo aqbashay ka laabashada furiinka isla markaana ay fursad kale isa siiyaan.
“Sawirrada aan soo dhigeynay bilihii dhowaa ayaa caddeynaya sidaan u faraxsanayn” qoraal u dhigan ayay Wanda soo raacisay sawir ay ku wada jiraan Icardi oo ay isugu dhowyihiin sida iyagoo is dhunkan raba.
“Dhaawac xoog leh ayaan kala kulmay wixii dhacay, xitaa maalin ayaan furiin ka dalbaday Mauro.
“Markii uu ogaaday inaysan jirin waddo aan ugu soo laaban karo, waxa uu ii sheegay inaysan sidaas ku wada socon karin, haddii kala-tagista ay tahay wadda kaliya ee uu xanuunka ku dhammaanayo ay is furaan, waxeynu wada waadnay qareennadeenna, Mauro waa uu aqbalay dhammaan shuruudaha, waxaanna wada saxiixnay heshiiska furiinka.
“Maalintii xigtay waxa uu iisoo qoray warqad aysan abid cidna iisoo qorin, waxa uu ii sheegay inuu wax walba i siiyay wax walbana uu heysto, farxaddeydana ay isaga farxad gelineyso.
“Kaddib waxaan garowsaday inaan wax walba heli karay, balse haddii aanan isaga la jiri lahayn aanan waxba heli lahayn, waxaan hubaa xaaladdan adag inay isku keen soo dhoweysey lammaane ahaan iyo qoys ahaan.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan labadeennuba xor u ahayn inaan soo af-jarno sheekada siddeedda sano gaartay, balse markaan oohinta ka daalnay, labadeenna ayaa is doorannay, waan ku jeclahay Mauro Icardi” ayay qoraalkeedii dheeraa kusoo xirtay.
Waxay intaas kaddib soo dhigeysay barteeda Instagram sawirro taxane ah oo ay labadooda ku wada jiraan iyadoo ku muujineysa inay kusoo laabteen sidoodii caadiga ahayd.
Wargeys kasoo baxa Ingiriiska oo daaha ka rogay inay Man United dooneyso afar macallin oo ay ku baddaleyso OGS... (Miyey Zidane iyo Conte ku jiraan?)